Doorashada Nooca saxda ah ee Mashruuca Naqshadeynta Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | La cusboonaysiiyay 23/07/2018 11:48 | General, Tricks
Muhiimad ahaan waa qaabka, midabada sida qoraalka shaqada naqshadeynta. Oo sida aan wada ognahay hadda, isticmaal far qorista majaajillo sans aad looma guuleysto. Waxay kuxirantahay qaabka shaqada aad maamusho, mid ama ka kale ayaa ka guuleysan doona. Tani waxay ugu wacan tahay sawirka aan dooneyno inaan ka bixino sumadda aan meteleyno.
Nooc loogu talagalay makhaayadaha cuntada degdega ah isku mid noqon doona shirkad duulimaad. Qaarkood waxay lahaan doonaan firfircooni badan, kuwa kalena waxay yeelan doonaan xoog badan ama sidoo kale waxay u baahan doonaan inay ahaadaan italic ama halkii nidaam badan. Waxaan halkaan ku siineynaa qaar ka mid ah talooyinka ugu fiican ee lagu doorto noocyada saxda ah ee loogu talagalay mashaariicda kala duwan ee aan hayno.
2 Tixgeli waxqabadka
3 Tijaabi si adag
4 Jihada muuqaalka iyo muuqaalka
5 Nooca qoraalka ku hareeraysan
Sidii aan ku sheegnay hordhaca mid kastaa wuu yeelan doonaa shakhsiyad ka duwan. Google waxay dooneysaa inay ka soocnaato Coca-Cola, sidoo kale Abuurista khadka tooska ah ka qaban doonaa Wararka IPhone.
Kahor bilowga mashruuc, aan ka fikirno qiyamka iyo ereyada qeexaya dareenka waxa aan dooneyno inaan abuurno. Tusaale ahaan, naqshadeynta ma noqon doontaa mid saaxiibtinimo, caqli badan, ama ammaan ah? Waxaa diirada la saaray dhammaan noocyada dadweynaha ama mid gaar ah? Ku xaddid seddex sifo si aad u hesho fikrad cad jihada ishaadu yeelanayso. Font saaxiibtinimo ayaa la soo koobi karaa oo runtii la akhrin karaa. Caymisku wuxuu noqon karaa xagal.
Had iyo jeer way habboon tahay in la hubiyo in font-ka la doortay uu ammaan yahay shabakadda oo si dhammaystiran loogu tarjumi karo biraawsar. Haddii aad isticmaaleyso maktabad font wanaagsan ama faylka xuruufta webka ee aaminka ah (OTF), fontkeenu waa inuu ahaadaa mid shabakad-aamin ah.
Qaybta labaad ee halkan looga fiirsanayaa waa waxqabadka. Isticmaalka maktabad sida Google Fonts ama Adobe Typekit waxay hubineysaa in wax waliba go'an yihiin oo aad filan karto waxqabad wanaagsan. Markaad kala soo degto a font web hubi inay ku jiraan dhammaan jilayaasha aad u baahan tahay mustaqbalka. Haddii aad ku koobnaato kaliya xarfaha iyo nambarada, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad abuurto calaamado qaylo-dhaan ah ama noocyo kala duwan oo ka maqan xirmada xarfaha.
Tijaabi si adag
Had iyo jeer ku tijaabi noocaaga foomamka ku habboon mashruuca. Ma garanaysid haddii nooc ka mid ahi uu shaqaynayo illaa aad ka aragto isaga oo ku jira cabbirka saxda ah iyo haddii dheelitirku shaqeynayo. Waxaad ubaahantahay fikrad macquul ah oo ku saabsan sida ay u ekaan doonto, taas oo inta badan aadan kaheli doonin Latin been abuur ah.
Jihada muuqaalka iyo muuqaalka
Jihada muuqaalka badanaa waa font iyo sida ay u egtahay, halka tonalku yahay isku dubaridka ereyada si farriin loo sameeyo. Labada cunsurba waa inay is waafajiyaan oo isu naxariistaan. Aynu adeegsanno qiimayaashii aan horay u go'aansanay, si aan u fahanno waxa ay il runti leedahay iyo sida fariintu u egtahay markaad isbarbar dhigto waxa qoran. Farta saxda ah waxay ku kordhin kartaa ereyada sidan, markaa astaamaha muuqaalka ee font waxay muhiim u yihiin xiriirka inuu shaqeeyo.
Astaamaha qaar ee la tixgeliyaa waa miisaanka, wareegsan, dherer, iyo qaabka ay xarfaha u kala wareegayaan xarafka ilaa xarafka. Waxaa laga yaabaa inay u kala baxaan inta u dhaxeysa serif, sans-serif, dash, ama xitaa qaababka gacanta lagu sawiro. Shakhsi kasta oo font ah ayaa kaa caawin doona inaad kiciso dareen ama farriin.
Nooca qoraalka ku hareeraysan
Nooca sawirku waa meel walba. Inta badan ee aad bilowdo inaad dareento hareerahaaga, oo aad go'aansato waxaad sameyneyso iyo waxyaabaha aadan jecleyn, go'aamada xikmada badan ee aad qaadan karto markaad dooraneyso font. Sida naqshadeeye ama hiwaayad, waa inaad ka feejignaataa jaangooyada kugu hareeraysan waqti kasta. Ma noqon karto wax maskaxdeenna ku jira oo keliya markaan runtii u baahanno. Waa inaan u aragnaa waxa nagu hareeraysan inay yihiin dhiirigelin aan ku guuleysanno mashruuceenna.
Raac #hasthags ee warbaahinta bulshada, akhri baloogyada ku saabsan farta qoraalka, booqo noocyada kala duwan shabakadaha internetka indhahana fiiri markaad banaanka u baxaysid. Isbarbar dhig shaqada wanaagsan ee qaar iyo kuwa xun kuwa kale, sawirro la qaado oo la hadal asxaabta isbarbar dhiga guuldarrooyinka iyo guusha. Inta badan ee aan ogaanno marka hore, inbadan ayaan gadaal ka ogaan doonnaa markay tahay qaabeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Doorashada farta saxda ah ee mashruuc